Wararkii ugu dambeeyay ee Ololaha doorashada xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka – XAMAR POST
Iyadoo la guda galay labada todobaad ee la doonayo in lagu soo doorto xilka banaan ee Guddoomiyaha Golaha shacabka oo Khamiistii la soo dhaafay si rasmi ah uu isaga casilay Guddoomiye Jawaari ayaa waxaa soo if baxaya loolan ka dhex bilowday Xildhibaanadii ku mideysnaa mooshinkii Jawaari.
Xildhibaanada Digil iyo Mirifle ayaa ku kala qeybsamay inay isku raacaan Musharax qura, iyadoo loolankan si weyn looga dhex dareemay Xafiisyada Madaxda dowladda oo markii hore qeyb ka ahaa ololihii ka dhanka ahaa Guddoomiye Jawaari.
Dhinacyadii Mooshinka ka waday Guddoomiye Jawaari ayaa la sheegay in qaarkood ay heysteen balan-qaad hore oo ahaa in lagu taageerayo xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka, hadii Jawaari la rido.
Madaxtooyada iyo Xukuumadda ayaa wada qorshayaal ay ku taageerayaan hal musharax oo qura, si xoogga la isugu geeyo.
Waxaa la sheegayaa in Musharaxiinta qaar ay yihiin Wasiiro, lagana yaabo inta aanay si rasmi ah ugu dhawaaqin in qaarkood lagu saaro cadaadis inay tanaasulaan, si hal musharax oo lagu mideysan yahay loo xusho.
Hase ahaatee Musharaxiin kale oo Xildhibaano ah oo damac ugu jira xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka ayaa iyana laga yaabaa in isku soo sharaxaan, kuwaasoo saameyn ku yeelan kara Musharax Madaxtooyada iyo Xukuumadda wadato.
Kulamo kala duwan ayaa labadii cisho ee u dambeeyay ka socday Muqdisho, kuwaasoo looga arrinsanayay Musharaxiinta la xulanayo, walina ma jirto illaa iyo hada hal musharax oo la isku raacay, waana tan keentay inay daahdo xafladihii la filayay inay sameystaan Musharaxiinta.
Ololaha lagu doonayo xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka ayaa waxaa ku soo biiray xubno aan markii hore la fileyn inay xusul duub ugu jiraan, waxaana la sheegayaa in dhinacyadaas ay taageero ka raadinayaan Xildhibaanada mucaaradka.
Illaa iyo hada cid si rasmi ah ugu dhawaaqday ma jirto Musharaxnimada Guddoomiyaha Baarlamaanka, marka laga reebo hadal heynta xubno dhowr ah oo magacyadooda suuqa soo galay.
Guddiga doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka ayaa la filayaa in la magacaabo saacadaha soo socda, kuwaasoo u xil saaran muddeynta waqtiga la qabanayo araajida musharaxnimada iyo shuruudaha laga rabo Musharax walba, waxaana mudada la filayo intaas oo idil lagu qabto ay tahay muddo 15 cisho gudahood.